Ireo fironana 5 ambony amin'ny fitantanana ny fananana nomerika (DAM) nitranga tamin'ny 2021 | Martech Zone
Mifindra amin'ny 2021, misy fandrosoana sasany mitranga ao amin'ny Digital Asset Management (Dam) indostria.
Tamin'ny taona 2020 dia nanatri-maso fiovana lehibe teo amin'ny fahazarana miasa sy ny fitondran-tenan'ny mpanjifa izahay noho ny covid-19. Raha ny filazan'i Deloitte, dia nitombo avo roa heny ny isan'ny olona miasa tao an-trano tany Suisse nandritra ny areti-mandringana. Misy koa ny antony hinoana fa hiteraka krizy a fitomboana maharitra amin'ny asa lavitra amin'ny sehatra manerantany. McKinsey koa dia nitatitra momba ny mpanjifa manosika mankany amin'ny fampitomboana ny serivisy nomerika na ny fizotry ny fividianana, ho an'ny diplaoma lehibe kokoa amin'ny 2020 noho ny teo aloha, misy fiatraikany amin'ny orinasa B2B sy B2C.
Noho ireo antony ireo sy ny maro hafa, manomboka 2021 amin'ny sehatra hafa tanteraka isika noho ny nantenainay herintaona lasa izay. Na dia fironana mitohy efa an-taonany maro aza ny fanaovana nomerika dia misy ny antony antenaina fa hitombo ihany ny filàna izany amin'ny taona ho avy. Ary miaraka amin'ny olona marobe miasa lavitra - sy ny vokatra sy serivisy novidiana ary notontosaina tamin'ny Internet tamin'ny ambaratonga mitombo - antenainay ny hahita fitomboana miavaka amin'ny isan'ireo fananana nomerika sy ny filàna fanohanana rindrambaiko. Noho izany, tsy misy isalasalana fa Rindrambaiko Digital Asset Management dia ho sehatry ny asa lehibe ho an'ny orinasa sy fikambanana maro amin'ny taona ho avy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijerena akaiky kokoa ny zavatra namboarin'i 2021 ho an'ny sehatra Digital Asset Management izahay ary hanao lisitra ireo fironana 5 ambony izay inoantsika fa ho malaza indrindra amin'ity taona ity.
Fironana 1: Fitantanana fivezivezena sy fananana niomerika
Raha zavatra iray no nampianarin'ny 2020 antsika dia ny maha-zava-dehibe ny fahazarana miasa. Afaka miasa lavitra sy amin'ny alàlan'ny fitaovana isan-karazany, dia lasa tombony ho an'ny filàna sy fikambanana maro.
Na dia efa nanampy ny olona sy ny fikambanana hiasa ela be aza ny sehatra DAM, dia mety ny mino fa hanamora ny asa mavitrika amin'ny ambaratonga lehibe kokoa ireo mpanome rindrambaiko. Anisan'izany ny fanatsarana ny fiasa DAM marobe, toy ny fampiasana fitaovana finday amin'ny alàlan'ny fampiharana na fanamorana ny fitahirizana rahona amin'ny alàlan'ny fifanarahana Software as a Service (SaaS).
Ao amin'ny FotoWare, izahay dia efa nanomboka niomana ho an'ny mpanjifa maniry fivezivezena bebe kokoa. Ankoatry ny fampitomboana ny fifantohanay amin'ny SaaS, nandefa fampiharana finday vaovao ihany koa izahay tamin'ny volana aogositra 2020, ahafahan'ny ekipa miditra sy mampiasa ny DAM an-dalana amin'ny alàlan'ny findainy.
Fironana 2: endrika fitantanana sy zon'ny fanekena
Hatramin'ny nifanarahan'ny lalàna EU GDPR tamin'ny taona 2018, dia nitombo hatrany ny filàn'ny orinasa sy fikambanana hanaraka ny votoatiny sy ny fankatoavany. Mbola afaka mahita fikambanana maromaro sahirana mitady fomba hanarahana tsara an'ireo fitsipika ireo ny olona.
Tamin'ny taon-dasa dia nanampy betsaka izahay mpampiasa DAM handrindra ny fizotran'asa hamahana olana mifandraika amin'ny GDPR, ary io dia tokony hifantohana amin'ny 2021 koa. Miaraka amin'ny fikambanana maro izay manome laharam-pahamehana ny fitantanana zon'olombelona sy ny GDPR, mino izahay fa ny endrika fanekena dia hanana toerana ambony ao amin'ny lisitry ny firarian'ireo mpandray anjara maro.
30% n'ny mpampiasa DAM no mihevitra ny fitantanana ny zon'ny sary ho iray amin'ireo tombony lehibe.
Miaraka amin'ny fampiharana ny endrika fankatoavana nomerika, ity dia tokony ho fiasan'ny fahefana lehibe kokoa, tsy amin'ny resaka fitantanana GDPR ihany, fa amin'ny karazana zon'ny sary marobe.
Fironana 3: fampidirana fitantanana nomerika nomerika
Ny lahasa voalohany amin'ny DAM dia ny fitsitsiana fotoana sy ezaka. Zava-dehibe noho izany ny fampifangaroana amin'ny fahombiazan'ny DAM, satria ahafahan'ireo mpiasa maka ny fananany mivantana avy eo amin'ny lampihazo rehefa miasa amina programa hafa, izay be dia be no anaovany izany.
Ny marika avo lenta dia miala amin'ny vahaolana mpivarotra tokana, manao ho laharam-pahamehana ireo mpanome rindrambaiko tsy miankina.
Tsy isalasalana fa tombony maro ny mifantina sy mifidy rindrambaiko fa tsy mifatotra amin'ny mpivarotra iray na roa. Na izany aza, ny fampidirana mety dia tokony hapetraka mba hahafahan'ny orinasa mahazo tombony betsaka amin'ny rindrambaiko mahaleo tena. Ny API sy ny plugins dia fampanjariam-bola lehibe ho an'ireo mpanome rindrambaiko maniry ny hijanona ho manan-danja ary hitohy ho tena ilaina amin'ny 2021.
Ao amin'ny FotoWare, tsikaritray ny plugins ho an'ny Adobe Creative Cloud sy Microsoft Office malaza indrindra eo amin'ireo mpivarotra, ary koa ny fampidirana ao amin'ny rafitra PIM na CMS an'ny fikambanana. Izany dia satria ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy maintsy mampiasa fananana samihafa amin'ny programa sy rindrambaiko maro karazana. Amin'ny alàlan'ny fametrahana fampifandraisana ao an-toerana dia afaka manafoana ny filàna misintona sy mampakatra rakitra foana isika.
Fironana 4: fitantanan-tsaina artifisialy (AI) ary fitantanana ny fananana nomerika
Ny iray amin'ireo lahasa mandany fotoana bebe kokoa rehefa miasa miaraka amin'ny DAM dia misy ifandraisany amin'ny fanampiana metadata. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny AI - ary ahafahan'izy ireo mandray an'io asa io - ny vidiny mifandraika amin'ny fotoana dia azo esorina lavitra kokoa. Hatramin'izao, vitsy ny mpampiasa DAM no manararaotra an'ity haitao ity.
Araka ny Fikarohana momba ny indostria FotoWare manomboka amin'ny taona 2020:
6% amin'ireo mpampiasa DAM ihany no efa nanambola tamin'ny AI. Na izany aza, 100% no mikasa ny hampihatra izany amin'ny ho avy, ka hiafara amin'ny fampitomboana ny sandan'ny DAM-ny.
75% dia tsy manana fe-potoana voafantina rehefa hanatanterahana izany fampiharana izany, milaza fa mety miandry ny fivoaran'ny haitao izy ireo, na mety tsy hahafantatra ny mety ho tsena ankehitriny.
Fampidirina amin'ny mpivarotra antoko fahatelo sy mpamatsy AI, Imagga, efa misy ao amin'ny FotoWare, ary mino izahay fa ny fampidirana an'io karazana io dia vao mainka hitombo ny lazany. Indrindra fa tsy mitsaha-mihatsara ny AI ary ho afaka hahafantatra lohahevitra maro kokoa rehefa mandeha ny fotoana, ary hanao izany amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Hatramin'izao dia afaka mamantatra sy mametaka sary misy loko marina izy ireo, saingy mbola miasa ny mpamorona hampahafantatra azy ireo ny zavakanto, izay mety ho endrika tsara indrindra ho an'ny tranombakoka sy galeria. Afaka mamantatra tsara tarehy ihany koa izy ireo amin'ity dingana ity, saingy misy ny fanatsarana sasany mbola miasa, ohatra, rehefa ampiasaina ny facemasks, ary ny ampahany amin'ny tarehy ihany no hita.
Fironana 5: fitantanana teknolojia Blockchain sy fitantanana fananana nomerika
Ny fironana fahadimy ho an'ny 2021 dia ny teknolojia blockchain. Tsy noho ny fiakaran'ny bitcoins fotsiny, izay ilana azy io raha te hanaraka ny fampandrosoana sy ny fifanakalozana, fa satria mino izahay fa ny teknolojia dia mety ho lasa malaza kokoa amin'ny faritra hafa ato ho ato, iray amin'izany DAM.
Amin'ny fampiharana blockchain amin'ny sehatra DAM, ny mpampiasa dia afaka mahazo fifehezana bebe kokoa ny fananany, manara-maso ny fanovana rehetra atao amin'ny rakitra. Amin'ny ambaratonga lehibe kokoa, ity dia afaka - ara-potoana - ahafahan'ny olona, ​​ohatra, hahalala raha nisy sary no simbaina na novaina ny fampahalalana raketiny.
Te hianatra bebe kokoa?
Ny Digital Asset Management dia mivoatra hatrany, ary ao amin'ny FotoWare dia manao izay fara herinay izahay hanarahana ny fironana. Raha te hianatra bebe kokoa momba anay sy ny zavatra azonay omena ianao dia afaka manoratra fivoriana tsy ara-dalàna miaraka amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana manokana aminay:
Mamandraha fivoriana miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny Dot Fotoware
Tags: rahona famoronana adobeaifahaizana artifisialyblockchainblockchain teknolojiataratasy fangatahana fanekenatohodranon'ifampidirana tohodranorindrambaiko tohodranofironana tohodranodeloittefitantanana fananana nomerikafampidirana fitantanana fananana nomerikarindrambaiko fitantanana fananana nomerikafironana fitantanana fananana nomerikaphotowaregdprsaryMcKinseyMicrosoft OfficepimZon'olombelonafironana teknolojiany fironana